Wholesale 2020 cusub oo dharka jumladaha ah oo dhan labajibbaarane caado astaan ​​adag oo dheel dheel dheel dheel dheel u leh haweenka kor u qaadista galmada yoga surwaalada Soosaarka iyo Warshadaha | Stamgon
2020 moodada cusub oo dhan oo labada dhinac ah caado caan ah oo xiro dheel dheel dheel dheel dheel ahna kor uqaada dumarka dumarka galmada yoga
Nambarka Moodeelka: YWQC-152X
Sharaxaad: Haweenka yoga surwaal
Xidhmada: 1pc / Opp Bag
Goobta asalka ah: Fujian, Shiinaha
Awoodda Sahayda: 10000 Dudud / gogo bil kasta
4 HABKA LAGU SAMEEYO Jaranjarooyinka xiisaha leh ee sarreeya waxay ka kooban yihiin 80% polyamide iyo 20% spandex. Super jilicsan, dareen qaawan, dhidid dhidid, isku buuqid, wiish kor u qaadid, cadayn cabir ah iyo anti cellulite. Iyagu waa sidaas oo ay neefsanayaan oo deggan yihiin, uma baahn doontid inaad ka saarto
WAAXDA BADAN EE CADAADISKA WAXBARASHADA CARRUURTA Naqshad sare oo dhexda ka socota, sare u qaadaysa dhexda isla markaana lugta dherer leh qaab. Dharka sarreeya waa fidsan oo taageero leh oo siiya isku-dheelitirka kaamilka ah ee taageerada iyo raaxada, wuxuu leeyahay xakameyn caloosha oo wanaagsan
☆ FADLAN & OPAQUE. Waxyaabaha Aan Lagu Arkin Iibka Capri Leggings ayaa daboolmay. Ha ka walwalin aragtidaas xishoodka leh ee xitaa xiisaha khiyaanada yoga
Pants Golayaashayaga yoga waxay u oggolaadaan xarrago, xarrago, galmo iyo moodal ahaan. Markaad jimicsiga jimicsiga gashanayso, oo aad gashanaysid galmada sare ee dheelitirka sare leh, silhouetteagu wuxuu u ekaan doonaa sexier ka badan abid
☆ Labada dhinac ee polyamide spandex dhar, laba qaab oo kala duwan, waad sidoo kale ku xirxi kartaa gudaha.
Magaca sheyga: 2020 moodada cusub oo dhan oo labada dhinac ah caado caan ah oo xiro dheel dheel dheel dheel dheel ahna kor uqaada dumarka dumarka galmada yoga
Qalabka: 80% Polyamide, 20% Spandex
Nooca badeecada: Yoga waxay xiraysaa & jimicsi la leedahay Adeegga OEM ODM
Cabbirka: S / M / L / XL
Xarafka: 100% Polyester
Qaabka: Sexy, moodada, Naqshadeysan,
Midab: Cagaar, buluug, guduud, madow, casaan, casaan
Lable & Logo Loogu talagalay in la aqbali karo
Waqtiga dirida: Alaabada saamiyada: 15 maalmood; OEM / ODM: 30-50 maalmood kadib markii muunadda la oggolaaday
Stamgon waa shirkad warshadeed oo loo yaqaan 'pparels' oo ah shirkad ku takhasustay bixinta dharka dumarka noocyo kala duwan oo dharka dabbaasha ah, sida galmada galmada, dharka dabbaasha, kondinis, 50s retro monokinis, oo ay ku jirto cabbir ku habboon qubayska cabbirka, iyo wixii la mid ah. Labiskayaga dabbaasha ayaa dhammaantood si gaar ah loogu talagalay inay kaa dhigayaan inaad dareento kalsooni badan oo aad u qurux badan. Kooxda Stamgon waxay u heellan tahay inay macaamiisheenda u keento khibrad nidaamsan oo wanaagsan iyadoo la siinayo heerarka ugu sarreeya ee adeeg ee ku saleysan tayada ugu fiican dhammaan badeecadeenna.
1.Waan ku dabakhi karnaa astaanta caanka ah dhamaan badeecadaheena, hadaad qabtid baahi, fadlan noo soo dir e-mayl leh sawirkaaga astaanta iyo xaddiga amarrada, ka dib waxaan hubin doonnaa qiimaha daabacaadda oo aan kuu soo xigasho kuu siino hal maalin shaqo gudaheeda.
2.Waxaan kaloo horumarin karnaa cabashooyin cusub sida ku xusan sawirkaaga farsamo, muunad, ama sawiro si buuxda u cad.
3.Ka raac cabirrada iyo midabbada.
4. Waxyaabaha fadeexadda ah ayaa lagu beddeli karaa baahidaada.
5.Waxaan leennahay warshadeyn iskaashi oo noo gaar ah, waxaan bixin karnaa gaarsiin waqtigeedii ku habboon.
6. Adeegga dabagalka maraakiibta ee Nice iyo siyaasada soo noqoshada ka dib marka alaabada la keeno.
Hore: Gabdhaha Mesh Leggings Yoga Pants leh jeebka, Aan-La-Arkaan Xakamaynta Caloosha Sare ee Capri Sare 4 Wad
Xiga: Saameyn heer sare ah oo firfircoon ayay haweenka xirtaan yoga suugaanta xiro go'an
Haweenka Yoga Pants
Yoga Pants leh jeebado
Yoga Pants Haweenka
Tayada koowaad, Amniga ayaa dammaanad qaaday
Caruurta Cusub ee Imaatinka Dabaasha hal gabadh oo gabdhaha dabaasha ah ...
Dhaqdhaqaaq dhaqameed ah oo qallalan oo jaangooyooyin jilicsan oo mardhow xeebta, 4 hab
iskuxiraal ah sexy hal gabal dabaasha riixaya dabaasha ...
Imaatinka cusub ee cute caadadiisu ahayd gabal Yara̵̵ ...
Dharka dharka dabaasha ee Bohemia cusub
Ciyaaraha sare ee waxqabadka isboortiga ee loogu tala galay dumarka leh dhabarka dhabarka ...